Warshadaha Soosaarayaasha Glass & Dayrarka Badbaadada Shiinaha iyo soosaarayaasha | Yongyu
Yaraynta khatarta kuleylka qabow oo la daadiyey
Muraayada badbaadada ee Yongyu Glass waxay la imaaneysaa cillad dheeraad ah oo astaamo ah oo kaa ilaalinaysa khataraha haddii ay wax dhacaan qaar. Waxyaabahayaga ayaa laga xoojiyaa gudaha si loo kordhiyo cimrigooda oo looga hortago inay ku dhacaan haddii ay shil galaan. Iyada oo la adeegsanaayo sheyga dhalaalaya ee aadka u sarreeya, muraayadda badbaadadayada ayaa la adkeeyay si ay u jabto waxayna u adkeysan kartaa culeyska halka xulashooyinka caadiga ahi ay ku fashilmaan.
Xaddiga badeecadan, waxaa lagu siinayaa fursado badan oo aad ku baarto. Guud ahaan, waxaa loo heli karaa sida muraayadda qabow oo la demiyey. Kii hore ayaa maray hababka kululaynta iyo qaboojinta ee gaarka ah si kor loogu qaado awoodeeda, halka kan dambe lagu qalabeeyay 'PVB' dhexdhexaadiye si uu wax qabad fiican u yeesho.
Quraarado laambooyay oo la qaboojiyey oo loogu talagalay qayb darbiyada, dayrarka, iyo inbadan
Maaddaama dhammaan alaabadayadu soo bandhigaan caabbinta saameynta dheeriga ee ay kuxiran tahay ilaalinta iftiinka UV, waxaa loo isticmaali karaa darbiyada daahyada, dabeysha gawaarida, daaqadaha soo bandhiga, qeybiyeyaasha xafiisyada, iwm. Ka sokow, waxaad noogu soo jeesan kartaa SGCC-oggolaanta iyo muraayadda-dabka haddii aad Codsiyada loogu talagalay ayaa ku lug leh halista noocan ah.
Waxa kale oo aad iibsan kartaa galaaska badbaadsan ee la xakameeyay si aad u dhinto buuqa ka baxsan. Tani waxay ka dhigeysaa mid ku habboon oo keliya ma aha ganacsiga oo keliya laakiin isticmaalka deggeneyaasha, taasoo u keenta raaxo noloshaada. Sahaminta alaabada la heli karo oo ka dooro qalabkaaga ugu fiican Yongyu Glass!
Hore: Muraayadda Wejiga / daahyada
Xiga: Muraayadaha Profile Glass
Dayrarka dhalada ee barkadaha
Dayrarka Glass Hoose
Dayrarka Glass kulaylka ah
Dayrarka Glass Fureysan
Nabadgelyada Glass Rolass / Dayrarka galaaska
Muraayada casriga ah (Muraayada korantada iftiinka)